Ithegi: impumelelo yomthengi | Martech Zone
Maka: impumelelo yomthengi
Zihambile iintsuku apho amaqela okuphumelela kwabathengi ebulaleka ngeefowuni ezingenamda kunye nabathengi ukuba baphathe. Kungenxa yokuba ngoku lixesha lokuba uhlasele kancinci kwaye ufumane okungakumbi ngokwempumelelo yabathengi. Yonke into oyifunayo zizicwangciso ezithile zobuhlakani, kwaye mhlawumbi noncedo oluvela kwinkampani yokuphucula isicelo se-SaaS. Kodwa, nangaphambi koko, konke kuyehla kukwazi iindlela ezifanelekileyo zempumelelo yomthengi. Kodwa kuqala, uqinisekile ukuba uyazi ukuba ikota. Masenze
NgoLwesihlanu, Meyi 18, 2018 Douglas Karr
Izolo ebusuku ndiye ndanethuba elimangalisayo lokudibana ndize ndimamele kathathu ophumelele i-Indianapolis 500, uHelio Castroneves. Ndilundwendwe lomnxibelelanisi kunye nomqeqeshi wokusebenza uDavid Gorsage, owabuza ukuba ndiza kubonelela ngohlaziyo lweendaba zentlalo kuwo wonke umsitho. Njengoko ndandiququzelela ii-hashtag, ndalandela abaxhasi, ndaza ndazi ii-VIP egumbini, omnye ugqatso lobuchwephesha wathula cwaka wabuza: Ngaba ngokwenene ungumcebisi weendaba ezentlalo? Inkqubo ye-
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 15, 2017 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Simisele ukubandakanyeka okutsha kunye neengcali zempumelelo yomthengi, iBolstra. IBolstra sisisombululo sesoftware (i-SaaS) kumboneleli weShishini kwiinkampani zeShishini ezijonge ukunyusa ingeniso yazo ephindaphindayo ngokunciphisa i-churn kunye nokuchonga amathuba e-upsell. Isisombululo sabo, sikwindlela elungileyo eyakhelweyo, inceda inkampani yakho ukuqhuba iziphumo ezinqwenelekayo ezifunwa ngabathengi bakho. Kule minyaka imbalwa idlulileyo, njengoko uhambo lwethu olukhawulezayo lokuthengisa luye lwavela kwaye sivavanya ukukhula kweentengiso 'zeshishini
I-Gainight iphehlelele ukukhutshwa kweNtwasahlobo yeqonga layo loLawulo lwaBaphumeleleyo, elenza kube lula kubathengisi ukuba bafumane ukujonga kwabathengi nge-360 ° kwaye basebenzisane nabanye ababandakanyekayo kwimpumelelo yabathengi kulo mbutho besebenzisa amandla ohlalutyo lwedatha. Kwiinkampani ezinkulu apho amasebe amaninzi ahlukeneyo-ukusuka kwintengiso ukuya kuphuhliso lwemveliso kunye nentengiso- abathengisi bacelwa umngeni ngamanqaku edatha ahlukeneyo malunga nomsebenzi wabathengi, kodwa kufuneka benze umgudu ngokudibeneyo wokugcina abathengi